Design | Myanmar BOC
Autocad, Video Editing, Photoshop စသည့် သင်ခန်းစာများကို စုစည်ထားပါသည်။
AutoCAD Tutorial သင်ခန်းစာများကို မြန်မာဘာသာဖြင့် U Myat Thu မှ စိတ်ထားစေတနာများစွာဖြင့် မြန်မာပြည်သားများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်၍သင်ပြပေးထားသော online သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါသည်။ MyanmarBOC သည် ဆရာများ စိတ်စေတနာထား၍ အခမဲ့ ပညာဒါနအနေဖြင့် သင်ပြပေးထားသော သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဒီလို မြန်မာလူငယ်များ တိုးတက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှကူညီပံ့ပိုးပေးသော ဆရာများအားလုံးကိုလည်း MyanmarBOC မှအထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Teacher U Myat Thu
U Myat Thu
Flimora Video Editing
July 8, 2020 /5Comments
Flimora video Editing သင်ခန်းစာတွင် Flimora ကိုအသုံးပြုပြီး video ဖန်တီးခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် video Edit လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ဖန်တီးချင်သူတို့အတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar BOC မှာ သင်ခန်းစာများကို အခမဲ့ သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာသင်ယူလေ့လာဖို့ Register ပြုလုပ်ပါ။ Register ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သင်ခန်းစာကို သွားရောက်ပြီး Enroll ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလေ့လာလိုသောသင်ခန်းစာအား Enroll ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါက Preview video များကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Enroll ပြုလုပ်ထားပါက preview ကြည့်ရှုနိုင်သော Video များအပြင် မိမိလေ့လာနေသော သင်ခန်းစာ၏ ပြီးစီးမှု course progress အခြေအနေကိုပါ သိရှိနိူင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Lesson တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း complete button နှိပ်ပေးပါ။ …
Teacher Krish Pdl
Video Editing with Adobe Premire Pro
October 16, 2019 /6Comments
Video Editing with Adobe Premire Pro Adobe Premiere Pro ဖြင့် Video Edit လုပ်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်. လေ့လာရတာအဆင်ပြေရင် ကျွန်တော်တို့ ကို Reviewပြုလုပ်ပေးပါဦးဗျာ Easy to edit video with Adobe Premiere Pro .. Is Adobe Premiere Pro free? Adobe Premiere Pro or Premiere Elements Trial version is your only way to get this professional video editing software absolutely free. basic video editing techniques Related…
Adobe Premiere Pro CS6 အခြေခံသင်ခန်းစာများ
Adobe Premiere Pro CS6 အခြေခံသင်ခန်းစာများ ကိုလေ့လာမယ်။
Smartphone Photography အကြောင်း လေ့လာကြမယ် Myanmar Best Online Courses | MyanmarBOC Smartphone photography Smartphone photography with smartphone will give you to take photograph with your smartphone and this lessons will give youabest smartphone photograph with your smartphone.Smartphone is easy to take pictures. Smartphone will give youabest setting likeapro. Related…
January 18, 2019 / 1 Comment
Video Editing tutorial lesson
AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ
AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ ကို Basic မှစ၍ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Photoshop ကို စိတ်ဝင်စာသူများအတွက် free online course ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကြားနိုင်အောင် online learning marketplace တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ app ဒေါင်းရန်
2020 © Myanmar Web Store မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။